ငါးမန်းကိုခုန်ချခြင်းဆိုတာဘာလဲ | Martech Zone
ဒီစိတ်ကူးတွေထဲကတစ်ခုပါ သင်ကြားထားသောစာပိုဒ်တိုများ ဒါပေမယ့်သင်ကအတိအကျဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Jumping the Shark သည်လူကြိုက်များပြီးလူကြီးမင်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ ဖက်ရှင်၊ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များမှဆင်းသက်လာသောကုန်းမြင့်လွင်ပြင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထိုအသုံးအနှုန်းကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ထိုအမည်ဖြင့်တည်ရှိသည့်နေရာကိုတရားဝင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ငါးမန်း Jump.
ဤစကားစုသည်အာသာ“ Fonzie” Fonzarelli ကိုရေကူးစက်လှေပေါ်ကနေရှည်လျားလာသောတီဗီဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုတွင်ခုန်ချခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည့်ဥပစာစကားဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်များ။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ်လူသိများသည်။ Tipping အမှတ် 1977 ခုနှစ်တွင်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ဝီကီပီးဒီးယား ဤဥပစာစကားကို Jump the Shark ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဖွင့်ခဲ့သောယောက်ျား၏ကောလိပ်အခန်းဖော်ကရေးသားခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
ဒီတော့အဲဒီမှာသင်၌ရှိသည်! သင်ပြောကောင်းပြောလိမ့်မည် ငါ့နေရာ အားလုံးအာရုံကိုမှရွေ့လျားကြောင်းယခုငါးမန်းခုန်တက်ခဲ့သည် Facebook က!
WordPress နှင့် Google Analytics မှအမျိုးအစားလူကြိုက်များမှုကိုခြေရာခံရန် Campaigns ကိုအသုံးပြုခြင်း